ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာဆက်စီများ | တိုယိုတာဆက်စီကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Cassette Radio (9)
Pearl White Toyota Succeed 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Silver Toyota Succeed 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 197 ညှိနှိုင်း
White Toyota Succeed 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
White Toyota Succeed 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 187 ညှိနှိုင်း
Lks 171 ညှိနှိုင်း
Blue Toyota Succeed 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Toyota Succeed 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 198 ညှိနှိုင်း
Toyota Succeed UL 2007
Lks 169 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Succeed UL 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Toyota Succeed UL 2006
Grey Toyota Succeed UL 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြ...
Pearl White Toyota Succeed 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Lks 190 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Succeed 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 167 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Succeed 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Silver Toyota Succeed 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: ...
Silver Toyota Succeed 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: ...
4 power window4back seat
တိုယိုတာ ဆစ်စီတွေဟာ နောက်ဖုံး အပါအ၀င် တံခါး (၅) ပေါက် ၀ဘ်ဂွန်ကားတွေ ဖြစ်ပြီး သူလည်း ပရိုဘောက်လို့ပဲ လုပ်ငန်းသုံးဖို့ အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်း တစ်ခု ဆိုပေမဲ့ ဌင်းက ပရိုဘောက်ထက်တော့ ပိုပြီး ဒီဇိုင်း လှပတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ၂၀၀၂ ကပဲ သူလည်း စတင်ပြီး မိတ်ဆက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆစ်စီတွေကတော့ ပရိုဘောက်တွေထက် အနည်းငယ်ပိုပြီး ဈေးကြီးပြီး ဒီဇိုင်းလည်း နည်းနည်း ကွဲသွားပါတယ်။ ရှေ့က ဘန်ပါနားမှာ ရှိတဲ့ ပါးချိုင့်တွေပါလာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မီးခြောက်တွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို မှန်မည်းတွေပါ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုး တက္ကစီတွေထက် စာလျှင် အိမ်စီကားတွေ အဖြစ်ပိုသုံးကြပါတယ်။ ပရိုဘောက်လို့ပဲ နေရာ နဲ့ အတွင်းခန်း ရိုးရှင်းတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၄၀၀ စီစီ( ဒီဇယ်) နဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ တွေ ရရှိပါတယ်။ UL , TXG, TX ဂရိတ်တွေကို ရရှိနိုင်ပြီး UL့ တော့ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ TXG ဂရိတ်တွေဆိုရင် ဆစ်စီ စပေါ့စ် ဗားရှင်းတွေမှာ ပါ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးလုံးတွေ၊ ရှေ့ရှယ်တွေ ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂ၇ိတ်မြင့်တွေမှာ မှန်ချိုး မှန်ခေါက်တွေကို ပါဝါ ခလုတ်နဲ့ လုပ်နိုင်ပါမယ်။ အတွင်းပိုင်းကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ကျယ်ဝန်းပြီး အဲယားကွန်း၊ ရေဒီယိုတွေတော့ ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို မန်နျူးယယ် ရွေးနိုင်ပြီး ဒီဇယ်ဆိုရင် မန်နျူးယယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆစ်စီ တွေဟာ ဂျပန်မှာ လုပ်ငန်းသုံးတွေ အဖြစ် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အတွက် ဒီဇိုင်းက လေးထောင့်ကျပြီး ရိုးရှင်းပါတယ်။ မီးလုံးကလည်း လေးထောင့် စပ်စပ်ပါပဲ ။ အထဲမှာလည်း အစိတ်ပိုင်းတွေကို အကြမ်းပုံစံ တည်ရှိပြီး အဌားယာဉ်နဲ့ လုပ်ငန်းသုံးတွေ အတွက်တော့ အံ့ကိုက်ပါပဲ။
ပရိုဘောက်တွေက အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အောက် ရနိုင်ပြီး ကျပ်သိန်း ၈၅ လောက်နဲ့တောင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဆစ်စီကတော့ ကျပ်သိန်း ၁၁၅၊ ၁၂၀ လောက်ကနေ စပြီး ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ တစ်ဆင့် မှာယူနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကနေ လည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။
ပရိုဘောက်တွေနဲ့ ဆစ်စီတွေကို ရှေ့ဖက် ကားဘန်ပါ အောက်နားမှာ အချိုင့်လေး ပါတာနဲ့ မပါတာမှာ ခွဲလို့ရပါတယ်။ ဆစ်စီတွေက ပါးချိုင့်လေးတွေ ပါပါတယ်။ အနောက်က ကားနောက်ဖုံးမှာလည်း မီးခြောက်လေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ထိုင်ခုံမှာ ဆစ်စီက ပိုနှိမ်ကြောင့် သိရပါတယ်။
တိုယိုတာ ဆစ်စီတွေဟာ ပရိုဘောက် အချောစားတွေလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ကားတစ်မျိုးပါပဲ။ သို့ပေမဲ့ ၁၅၀၀ စီစီမှာသာ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး ၁၄၀၀ စီစီဆိုရင် ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြစ်ပြီး အရင် ပရိုဘောက်စ်တွေရဲ့ ၁၃၀၀ စီစီ ကားတွေရဲ့ အပူချိန်မြင့်မှုတွေကနေ ကွာဝေးနိုင်တဲ့ကားတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။